PC anaghị amata gam akporo m, kedu ihe m ga-eme? | Gam akporosis
N’agbanyeghi Gam akporo bu sistemu eji eji igwe eji eme ihe nke ụwa (ọ dị ugbu a n'ihe karịrị asatọ n'ime ekwentị iri na mbadamba), ọ bụ ezie na ọ gbanwere n'ụzọ dị oke egwu site na mmalite ya na ụdị nke ugbu a ọtụtụ n'ime gị na-anụrị ụtọ, eziokwu bụ na enwere ka chinchi (na a ka ga-enwe, n'ihi na ọ dịghị ihe na ndụ bụ zuru okè), karịsịa mgbe na-agbalị jikọọ ihe gam akporo ngwaọrụ na kọmputa.
E nwere oge kọmputa anaghị achọpụta mobile na anyị ejikọrọ. Ihe kpatara na ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ ọtụtụ, site na ihe yiri ka ọ dị mgbagwoju anya na ihe na-enweghị isi, ọdịda na draịva, njehie na ngwaike, nhọrọ anyị anaghị arụ ọrụ ... Ma maka ọtụtụ ebumnuche, ọ bụ ka dị mkpa ijikọ ekwentị na kọmputa maka ịdabere na ọrụ, yana ka ị ghara ịda mba na nnwale, taa anyị ga-anwa nyochaa isi na-akpata ihe mere PC m anaghị amata mkpanaka ahụ, yana azịza ha nwere ike. Dịla njikere?
1 Ka anyị leba anya na ngwaike
2 Ọkwọ ụgbọala, ndị ị na-atụ egwu ya
3 Mgbe niile ụzọ ziri ezi
4 Ọ dị ka nzuzu mana ...
5 Mweghachi zuru ezu
Ka anyị leba anya na ngwaike
Ka anyị malite na ihe na-abụkarị otu n'ime ihe ndị kachasị akpata: nsogbu ngwaike. Ọ bụ nsogbu a na-ahụkarị mgbe anyị hụrụ ngwaọrụ ndị "tara ahụhụ" ma ọ bụ ndị dịkarịrị afọ ole ma ole ma ọ dịkarịa ala, teknụzụ tozuru oke. Mgbe anyị na-ekwu maka nsogbu ngwaike, anyị na-ekwu maka ekwentị mkpanaaka n'onwe ya, yana njikọta na ọbụlagodi eriri njikọ.
Azịza ya dị mfe ma na-agafe nyocha nke ngwaike ahụ, ya bụ, lelee na ekwentị gam akporo na-arụ ọrụ nke ọma, lelee na njikọta ọnụ adịghị emebi, lelee na eriri USB na-arụ ọrụ nke ọma na ike rutere ekwentị… Mgbe ụfọdụ, ihe ngwọta nwere ike ịdị mfe dịka ịnwale eriri ọzọ.
Ọkwọ ụgbọala, ndị ị na-atụ egwu ya
Ọ bụ ezie na nsogbu ngwaike bụ otu n'ime ihe ndị kachasị akpata, na-enweghị mgbagha nsogbu na ndị ọkwọ ụgbọala na-achicha mgbe kọmputa ahụghị mobile. Driversgbọ ala achọ ịma!
Ndị ọkwọ ụgbọala ahụ bụ ndị na - achịkwa ya, ya bụ, ha bụ ihe na - enye ohere, mgbe ị jikọọ ekwentị gam akporo gị na kọmpụta, ọ na - achọpụta ya ma nye ya ohere ime ihe ọ chọrọ ime, dịka ọmụmaatụ, nyefee egwu sitere na PC gaa na ekwentị . Ọzọkwa, ekele ọkwọ ụgbọala I nwekwara ike nwalee nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo site na ịgbanwe ROM, yabụ nke a bụ akụkụ dị oke mkpa nke na-ekpuchi ndị ọrụ ụlọ na ndị mmepe.
Ọ bụrụ na PC m anaghị amata mkpanaka ahụ, ọ ga-abụ na enweghị ndị ọkwọ ụgbọala ndị dị mkpa ime nke a arụnyere na kọmputa gị, ọ bụ ezie na ọ bụkwa eziokwu na, n'ihe banyere ụfọdụ ekwentị "pere mpe", ị gaghị achọ sọftụwia ọzọ. Ihe gbanwere mgbe anyị na-ekwu maka ụdị dịka Samsung na ndị ọzọ metụtara mkpa.
N'okwu ndị a, eziokwu bụ na i kwesịghị inwe nsogbu, n'ihi na ọ bụ otu ekwentị ahụ bụ ọrụ maka ịwụnye ngwanrọ dị mkpa mgbe ị jikọtara ya na PC gị mana, dịka anyị mụtara na mbido, ọ nweghị ihe zuru oke nke mere na nke a nwere ike ịda. Mgbe kọmputa ahụ anaghị achọpụta ekwentị, naanị chọọ Google maka ndị ọkwọ ụgbọ ala maka ụdị ekwentị gị, ị ga-ahụ ha ngwa ngwa wee nwee ike ịwụnye ha. Ọmụmaatụ, Samsung ọkwọ ụgbọala anyị nwere ha ebe a.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwụnye ma nwalee omenala ROM ma ọ bụ na ịchọrọ ịgbanye ngwaọrụ gị, wụnye ngwanrọ mmemme mmemme Android Studio ma obu mmemme 15 sekọnd ADB Installer nke ị nwere ike ibudata ndị ọkwọ ụgbọala niile ịchọrọ.
N'ikwu okwu banyere ndị ọkwọ ụgbọala, ị nwekwara ike ịnwale ihe ndị a na kọmputa gị:
Gaa na kọmputa m, pịa nri ma họrọ njirimara.
Pịa na ngwaike na menu nke ga-apụta
Pịa Ngwaọrụ Manager.
Ma mgbe ndepụta gosipụta, họrọ njikwa Universal Serial BUS (BUS)
Ugbu a, pịa aka ma gbanye nhọrọ "onye njikwa njikwa enwekwukwa"
a sị na ọ nwere nkwarụ.
Mgbe niile ụzọ ziri ezi
A na-ekwukarị na e nwere ụzọ ziri ezi nke ime ihe na, olee otu ọ ga - esi bụrụ ihe ọzọ, gị gam akporo ga-adị na ezi mode mgbe anyị jikọọ ha na kọmputa Ka o wee nwee ike chọpụta ya ma anyị nwere ike iji ya rụọ ọrụ, kwesiri ịba uru, n'ụzọ ziri ezi.
Mgbe ị jikọọ gam akporo ekwentị gị na PC enwere ụzọ atọ enwere ike ị ga - ahọrọ nke kwesịrị ekwesị:
Nyefee faịlụ. Dị ka ọ na-egosi, ọ bụ ụzọ nke ị ga-enwe ike nyefee faịlụ site na gị gam akporo na PC ebe ọ na-enye kọmputa ikike iji nweta faịlụ na mkpanaka gị na ngwaọrụ.
Jụọ ngwaọrụ a Naanị ya ga - enye gị ohere ijupụta ekwentị gị na ndụ na ume, mana ị gaghị enwe ike ijikwa ụdị faịlụ ọ bụla.
Nyefee Foto (PTP), bụ ọnọdụ ga-enye gị ohere ijikwa foto gị, yana naanị foto gị.
Ma n’ezie echefula lelee nhọrọ «USB debugging» na ngalaba «Development nhọrọ» Ọfọn, na ụfọdụ ọ nwere ike ịbụ ihe kpatara na kọmputa anaghị achọpụta mobile.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta nhọrọ a, mee ihe ndị a: gaa na "Ntọala" → "Banyere ngwaọrụ" wee pịa ọtụtụ ugboro na "Mee nọmba". Nke a ga - enyere "Mmepe Nhọrọ".
Ọ dị ka nzuzu mana ...
Ikekwe, tupu ị na-eme nyocha ọ bụla ọzọ karịa ndị ahụ anyị kpọtụrụ aha, ị kwesịrị nwaa ịmalitegharịa ekwentị mkpanaaka. Amaara m na ọ dị ka ihe ngwọta dị mfe, na-alaghachikwa ugboro ugboro. Ọbụna mgbe anyị nụrụ ọkachamara ọkachamara na-ekwu ya, anyị enweela ike ịche echiche «na maka ndị a ka ị gụrụ?». Ma nke bụ́ eziokwu bụ na Ọ ga-eju gị anya ugboro ole ịmalitegharị ọnụ bụ ihe ngwọta mgbe PC m anaghị amata mkpanaka, yana na ọtụtụ njehie ndị ọzọ nwere ike ibilite. Cheta: "ịmalitegharia n'oge ga - ewepu nzuzu na ekwentị gị"? Iji mee nke a, pịa ma jide bọtịnụ Ike / leepra ruo mgbe nhọrọ gosipụtara na ihuenyo. Họrọ ya ma chere.
Mweghachi zuru ezu
Mgbe ụfọdụ usoro siri ike dị mkpa. Na-enweghị nke ọ bụla dị n’elu ọ rụọ ọrụ, ma ọ bụrụ na ekwentị mkpanaka gị anaghị ejikọ na PC, ị kwesịrị weghachite ama gi, ya bụ, hichapụ ihe niile dị na ya (onyogho, vidiyo, ngwa, kọntaktị, wdg) ma hapụ ya ka efu, dị ka ụbọchị ị wepụrụ ya na igbe ya maka oge mbụ.
Oge ụfọdụ, ọ bụ “obi ọjọọ” a bụ naanị ihe ngwọta, ọkachasị ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ndị merela agadi, jiri ọtụtụ ihe, na-adọkpụ nsogbu n'ime. Eleghị anya, site na iwughachi mweghachi ahụ, ọ bụghị naanị na ọdịda nke ekwentị m anaghị ejikọ na PC ka a ga-agbazi, mana ị ga-ahụkwa na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ma ị nwere ohere nchekwa ọzọ.
N'ezie, tupu ịlaghachi, echefukwala ime nkwado ndabere nke data na faịlụ gị niile.
Enwere m olileanya na ngwọta ọ bụla a chọrọ na post a, site na ịmaliteghachi iji weghachite, ga-abara gị uru ma ọ bụrụ na kọmputa gị enweghị ike ịmata ama gam akporo gị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ka kwesịrị ịtụle ma oge eruola iji megharịa ọdụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » PC anaghị amata gam akporo m, kedu ihe m ga-eme?
Qualcomm nwere ihe ngosi 5G nke izizi nke dabara na ekwentị
Tụnyere BQ Aquaris E10 na BQ Edison 3